Zimbabwe Cricket's New English Coach Alan Butcher Leads Team to West Indies
Coach Alan Butcher will be backed by Steven Mangongo who led his Mutare-based franchise team the Mountaineers through a successful season claiming the Stanbic Bank Twenty20 tournament in February, among other wins
Zimbabwe’s cricket team was on its way Monday to the West Indies to play in the World Twenty20 tournament under its new English coach, Alan Butcher.
Zimbabwe will play Sri Lanka on May 3 then move on to the other member of its group, New Zealand.
Zimbabwe Cricket Media Manager Jeffrey Murimbechi told VOA Studio 7 reporter Marvellous Mhlanga-Nyahuye that Butcher will be backed by Steven Mangongo who has just led his Mutare based franchise team the Mountaineers through a successful season winning the Stanbic Bank Twenty20 tournament in February and the Faithwear-Metbank One-Day competition over the weekend.
The Mountaineers rode on the brilliance of batsman Hamilton Masakadza, whose form will be key for Zimbabwe's success in the West Indies.
Also assisting Butcher will be former "rebels" Grant Flower, who recently returned from a stint in the United Kingdom, and bowling coach Heath Streak, which could give Zimbabwe a critical edge in the tourney.
Interview With Jeffrey Murembechi